नागरिकतामात्रै भए पनि मतदान गर्न पाइन्छ ? « Mechipost.com
नागरिकतामात्रै भए पनि मतदान गर्न पाइन्छ ?
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०७९, बुधबार १२:२९
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा दर्ता गराएका नयाँ मतदाता र परिचय पत्र हराएकाहरूलाई मतदाता परिचयपत्र दिने भएको छ।
आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पुगिसकेका व्यक्तिहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाहरूले पनि मतदान गर्न पाउने बताएको हो। ‘वैशाख २८ र २९ गते सबै मतदानस्थलहरूमा मतदान केन्द्रका लागि खटिएका मतदान टोलीहरूबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण र मतदाता शिक्षा अन्तर्गत मतदान गर्ने सही तरिकासम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।
परिचय पत्र हराएका व्यक्तिहरूलाई गत फागुन २० गते सम्ममा वडा कार्यालयमार्फत् निवेदन दिन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसका लागि आयोगले बुधबार र बिहीबार मतदानस्थलहरूमा मतदाता परिचय वितरण गर्न लागेको हो। नागरिकता लिँदा मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका व्यक्तिहरूले सो परिचय पत्र पाउने आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।
‘आयोगले हरेक प्रशासन कार्यालयमा एउटा स्थल राखेको छ। त्यहाँ १६ वर्ष पुगेकाले नागरिकता लिन्छन् त्यही बेला आफ्नो नाम पनि टिपाएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले नाम पहिल्यै टिपाइसकेका तर अब वैशाख २९ गतेसम्ममा १८ वर्ष पुग्ने मतदाताहरूलाई समावेश गरिएको छ। नामावली आइसक्यो। उनीहरूले परिचयपत्र पाउँछन्।’
त्यस्तै आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि मतदाता नामावलीमा भएका व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउने भएको बताए। ‘स्थानीय तहमात्रै होइन सबै तहको चुनावको पहिलो शर्त भनेको मतदाता नामावली हो। मतदाता नामावलीको पूर्व शर्त भनेको नागरिकताको प्राप्ति हो। त्यसकारण नागरिकता प्राप्त गरेर वडा विभाजनभित्र परेका ६ हजार ७४३ वडा भित्रका सबै नागरिकले जो मतदाता छन्। मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
यस्तै अहिले नागरिकतामात्रै भए पनि मतदान गर्न पाउने भन्ने कुराको निर्णय भइनसकेको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘यसबारे निर्णय भइसकेको छैन। यस विषयमा छलफल नै गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘मतदाता नामावलीमा दर्ता गराइसक्नेहरूले मात्रै मत दिन पाउँछन्।’